အဏ္ဏဝါရေပြင်ဂေဟစနစ်နှင့် ငါးသယံဇာတအခြေအနေများ၏ သုတေသနရလာဒ်များပေးအပ် – Agri Digit News
အဏ္ဏဝါရေပြင်ဂေဟစနစ်နှင့် ငါးသယံဇာတအခြေအနေများ၏ သုတေသနရလာဒ်များပေးအပ်
Posted on Author adminComments Off on အဏ္ဏဝါရေပြင်ဂေဟစနစ်နှင့် ငါးသယံဇာတအခြေအနေများ၏ သုတေသနရလာဒ်များပေးအပ်
ငါးသယံဇာတများကို ရေရှည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖမ်းဆီး ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရ မဟုတ်သည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ အားလုံး “ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည့် စွမ်းအား” နှင့် အတူ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ပြင် ငါးသယံဇာတများကို လက်ရှိနိုင်ငံသားများအတွက် သာမက နောင်သားစဉ် မြေးဆက် အတွက်ပါ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် စနစ် တစ်ရပ် တည်ထောင်ထား နိုင်အောင် လုပ်‌ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက နေပြည်တော် Kempinski ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် သည့် အဏ္ဏဝါရေပြင်ဂေဟစနစ် နှင့် ငါးသယံဇာတအခြေအနေများ၏ သုတေသန ရလာဒ်များ ထုတ်ပြန်ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က ပြောကြား သည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီး စိန်ဝင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ အမြဲတမ်းအတွင်း ဝန်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes၊ နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့မှ Norwegian State Secretary ဖြစ်သူ Ms. Marianne Hagen ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် H.E. Ms. Xiaojie Fan ၊ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ရေငန်သုတေသနဌာန (Institute of Marine Research – IMR) မှ Dr. Jens-Otto Krakstad ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ သုတေသနပညာရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့် ကတိကဝတ်ပြုထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ ဖြစ်သည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း၊ နိုင်ငံအဆင့် ဗီဇ မျိုးစုံ မျိုးကွဲ ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်း စီမံချက်အပါအဝင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း သယံဇာတများနှင့်ဆိုင်သည့် ထာဝစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များအား သက်ဆိုင် ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ ကြောင်း၊
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ့ အဏ္ဏဝါ ရေပြင်ဂေဟစနစ်နှင့် ငါးသယံဇာတ အခြေအနေ များ ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် အဓိကပံ့ပိုးကူညီကြသည့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့၊ ပေါင်းစပ် ကူညီပေးသည့် ကုလသမ္မဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့(FAO)၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုး ကူညီ ပေးသည့် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ရေငန်သုတေသနဌာန (Institute of Marine Research – IMR)တို့အား ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့မှ Norwegian State Secretary ဖြစ်သူ H.E. Ms. Marianne Hagen ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ FAO ဌာနေ ကိုယ်စား လှယ် H.E. Ms. Xiaojie Fan တို့က အသီးသီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းသိန်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Dr. Fridtjof Nansen သုတေသန ရေယာဉ်ဖြင့် တွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ်ကို လည်းကောင်း၊ IMR မှ Dr. Jens-Otto Krakstad က သိပ္ပံနည်းကျ ရှုထောင့်မှ အခြေခံ၍ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း ဆိုင်ရာကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြကြ သည်။
အခမ်းအနားတွင် FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် H.E. Ms. Xiaojie Fan က Dr. Fridtjof Nansen သုတေသန‌ရေယာဉ်ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ အဏ္ဏဝါ ရေပြင် ဂေဟစနစ် နှင့် ငါးသယံဇာတအခြေအနေများ၏ သုတေသန ရလာဒ်များကို ပေးအပ်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က လက်ခံ ရယူပြီး FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ၊ နော်ဝေနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး နှင့် Norwegian State Secretary တို့အား အမှတ်တရလက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး ကမ်းရိုးတန်း အရှည် ၂၈၃၂ ကီလိုမီတာ ၊ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်း (Continental Shelf) ရေပြင် အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၂၈၀၀၀ sqkm ခန့်နှင့် အထူးသီးသန့်စီးပွားရေးဇုန် ဧရိယာ ၄၈၆၀၀၀ sqkm ခန့်အား ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများစွာ တည်ရှိ ကျက်စားနေ ထိုင်ကြသည့် ရေငန်ဂေဟ စနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားလျက်ရှိ၍ အဆိုပါ ဂေဟစနစ်တွင် ဒီရေတော ဂေဟ စနစ်၊ သန္တာကျောက်တန်းဂေဟစနစ်၊ ပင်လယ် မြက်ခင်း၊ လတာပြင်၊ မြစ်ဝနှင့် သဲသောင် ကမ်းခြေ ဂေဟစနစ်များ စသည်တို့ ပါဝင် သည့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပုံမှန် လည်ပတ်နိုင်ရန် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါကြောင်း၊
‌ဂေဟစနစ်တစ်ခု ထိခိုက် ပျက်စီးပါက စနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးအပေါ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက် သွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ငါးဖမ်းဆီးခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂေဟစနစ်နှင့်ဆီလျော်သည့်၊ ‌‌ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက် စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန က ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်မော် က ပြော သည်။
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ငါးသယံဇာတများကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ထိန်းသိမ်း‌ ဆောင်ရွက် ရာတွင် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်နှင့် ငါးသယံဇာတတည်ရှိမှုပမာဏ အား ဆန်းစစ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့၏ အစီအစဉ်အရ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ Dr. Fridtjof Nansen Research Vessel ဖြင့် မြန်မာ့ ရေပြင် အတွင်းလာရောက်၍ ၁၉၇၉ ၊ ၁၉၈၀၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါသုတေသနလုပ်ငန်းများမှ ရရှိလာသည့် တွေ့ရှိချက် ရလဒ်များကို အခြေခံသည့် အကြံပေးသုံးသပ်ချက်များကို ငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ-ဂျပန် စိုက်ပျိုး‌ရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။